FAQs - AOOD Technology Limited
Kavina fitetezana miaramila Aerospace
Capsule miady amin'ny kapsily miaramila
Taratra fitetezana radara
Fiarahan-dehilahy mihodina matetika
Miaraka amin'ny Rotary Coaxial
Fifanarahana Rotary optika fibre
Finger optic hybrid slip pirinty
Peratra fitetezana indostrialy
Amin'ny alàlan'ny peratra bore slip
Rantsolotra slip-system Servo
Capsule slip slip
Kavina avo lenta haingam-pandeha avo lenta
Peratra fitetezana avo lenta
Pancake slip slip
Misaraka amin'ny peratra slip
Kavina avo haingam-pandeha
Peratra fitetezana maripana ambony
Peratra fitetezana fanafody
Peratra fitetezana boro lehibe
Ireo mpampifandray mihodina
Ranon-tsolika mifangaro amin'ny tsiranoka entona
Fananganana sy fambolena
Safidy amin'ny modely
Inona no maha samy hafa ny peratra slip sy ny union rotary?
Ny peratra slip na ny union rotary dia ampiasaina handefasana haino aman-jery avy amin'ny faritra rotary mankany amin'ny faritra mijanona eo am-pihodinana. Saingy ny fampahalalam-baovao momba ny peratra slip dia herinaratra, famantarana ary data, ranon-tsolika sy entona ny haino aman-jery rotary.
Ahoana ny fiantohana ny vokatra mihodina herinaratra AOOD?
AOOD dia manana fiantohana herintaona ho an'ny vokatra mihodina elektrika rehetra afa-tsy ny peratra slip. Raha misy singa tsy mandeha tsara eo ambanin'ny tontolon'ny asa mahazatra dia tazomin'ny AOOD na soloina maimaimpoana izany.
Ahoana ny fisafidianana ny maodelin'ny peratra slip ho an'ny fampiharana?
Ny isan'ny boriborintany, ny ankehitriny sy ny herinaratra, ny rpm, ny fetran'ny habeny dia hamaritra hoe iza amin'ireo maodelin'ny peratra kapaoty AOOD ilaina. Ho fanampin'izany, hodinihinay ny tena fampiharana anao (hovitrovitra, ora miasa sy karazana famantarana) ary ataovy izay vahaolana tena izy ho anao.
Fa maninona aho no misafidy AOOD TECHNOLOGY LIMITED ho mpiara-miasa aminay? Inona no tombony anananao?
Ny tanjon'ny AOOD dia ny hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa. Avy amina endrika voalohany, fifantenana materialy, famokarana, fanandramana, fonosana ary fandefasana farany. Manolotra serivisy tsara indrindra foana izahay ary manome antoka fa afaka mahazo vokatra kalitao tsara indrindra ny mpanjifanay amin'ny fotoana fohy.
Ahoana ny fomba hisorohana ny AOOD amin'ny peratra fanelingelenana?
Ny injenieran'ny AOOD dia hisoroka ny fanelingelenana famantarana avy amin'ny lafy ambany: a. Ampitomboy ny halaviran'ny peratra famantarana sy peratra hery hafa avy ao anaty peratra slip. b. Mampiasà tariby ampinga manokana handefasana signal. c. Ampio ampinga ivelany ho an'ny peratra famantarana.
Inona ny ora fandefasana AOOD rehefa apetraka ny baiko?
Manana habetsahan'ny tahiry mety ho an'ny ankamaroan'ny peratra slip isika, ka matetika ny herinandro fandefasana dia ao anatin'ny herinandro. Ho an'ny peratra slip vaovao dia mety mila 2-4 herinandro isika.
Ahoana no hametrahako ny peratra slip amin'ny alàlan'ny fiterahana?
Matetika isika no mametraka azy io amin'ny alàlan'ny fametahana sy mametaka volo, afaka manampy flange mba hifanaraka amin'ny fametrahana anao raha mila izany ianao.
Ho an'ny rafitra antena zanabolana zanabolana an-dranomasina indroa-tarika, azonao atao ve ny manome soso-kevitra vahaolana momba ny peratra slip?
AOOD dia nanolotra karazana peratra slip ho an'ny rafitra antena, ao anatin'izany ny rafitra antena an-dranomasina sy ny rafitra antena eny an-dalana. Ny sasany amin'izy ireo dia takiana amin'ny famindrana signal matetika ary ny sasany amin'izy ireo dia mila diplaoma fiarovana avo kokoa, ohatra IP68. Vitantsika rehetra izany. Mifandraisa azafady AOOD raha mila takiana antsipirihany momba ny peratra slip.
Miaraka amin'ny fitomboan'ny haitao vaovao, ny peratra slip mandroso kokoa dia takiana amin'ny famindrana signal manokana. Inona avy ireo famantarana azo afindra amin'ny peratra slip AOOD?
Miaraka amin'ny traikefa R&D sy fiaraha-miasa nandritra ny taona maro, dia nafindra soa aman-tsara ny peratra horonan-tsary AOOD, signal video digital, avo matetika, fibaikoana PLD, RS422, RS485, Inter Bus, CanBus, Profibus, Device Net, Giga Ethernet sns.
Mitady peratra slip aho handefasana 1080P sy fantsona famantarana fahita mahazatra hafa amin'ny rafitra kely. Afaka manolotra zavatra toa azy ve ianao?
AOOD dia namolavola peratra slip HD ho an'ny fakan-tsary IP sy fakan-tsary HD izay afaka mamindra ny signal HD sy ny signal iraisana amin'ny frame ring ring slip kapsula.
Manana zavatra afaka mamindra 2000A na ankehitriny ve ianao?
Eny Manana isika. Ny mpampifandray elektrika AOOD dia ampiasaina fotsiny hamindrana ny loko ambadika: # f0f0f0; avo ankehitriny.
Raha misy peratra fiarovana avo lenta ny peratra slip, toa ny IP66. Ho goavambe ve ny tselika?
Miaraka amin'ny haitao mandroso sy ny fitsaboana manokana, AOOD dia afaka manamboatra peratra slip tsy IP66 ihany fa torque kely kely koa. Na dia peratra slip lehibe aza dia ampiasainay hiasa tsara miaraka amin'ny fiarovana avo kokoa koa.
Ho an'ny tetik'asa ROV dia mila vanin-taolam-pandinihana roa izay afaka mampita signal sy hery fibre optika amin'ny alàlan'ny ranomasina lalina. Afaka manolotra zavatra toa izany ve ianao?
AOOD dia nanolotra tamim-pahombiazana ireo tonon-taolana rotary ho an'ny ROV sy ireo fampiharana an-dranomasina hafa. Ho an'ny tontolo iainana an-dranomasina, isika dia miara-miasa amin'ny fibre optic rotary ho lasa peratra fitetezana herinaratra, handefasana fambara, herinaratra, data ary mari-pamantarana fibre ao anaty fiangonana iray. Ankoatr'izay, raisinay an-tsaina tanteraka ny fepetra fampiasana, ny trano fonenan'ny peratra slip dia hatao amin'ny vy tsy misy fangarony, fanonerana faneriterena ary kilasy fiarovana IP68 dia horaisina ihany koa.
Salama, ny ekipanay dia mamolavola tetikasa robotic, mila sendika rotary robotika hamahana ny olan'ny tariby izahay, ampahafantaro ahy izay azonao atao amin'izany.
Amin'ny fampiharana robotic, ny peratra slip dia fantatra amin'ny hoe robotic rotary joint na robina slip slip. Izy io dia ampiasaina handefasana ny famantarana sy ny herinaratra avy amin'ny endriny ifotony mankany amin'ny vondrona fanaraha-maso sandry robotic. Manana faritra roa izy: ny ampahany mijanona dia napetraka eo amin'ny sandrin'ny robot, ary ny ampahany mihodina kosa miakatra amin'ny tànan'ilay robot. Miaraka amin'ny rotary robotic joint, ny robot dia afaka mahavita fihodinana 360 tsy misy farany tsy misy olan'ny tariby. Raha ny filazan'ny robot, dia misy elanelana manodidina ny robotic rotary. Matetika ny robot feno dia mila peratra slip robot ary ireo peratra slip ireo dia mety amin'ny fepetra takiana samihafa. Hatramin'izao dia efa nanolotra peratra fantsona kapsily vita amin'ny sela isika, amin'ny alàlan'ny peratra slip slip, peratra slip cake, fantsom-pifandraisana rotary, optika rotary electro-optic ary vahaolana rotary manokana ho an'ny robotika.
Toa tsara ny vahaolana amin'ny peratra slip, fa inona ny fitsapana hataonao? Ahoana no ataonao?
Ho an'ny fivorian'ny kavina mahazatra, toy ny peratra kely paingotra kely AOOD, dia hizaha ny tanjaky ny herinaratra sy ny ankehitriny, ny signal, ny torque, ny tabataba elektrika, ny fanoherana ny insulation, ny tanjaka diélectric, ny refy, ny fitaovana ary ny bika aman'endriny. Ho an'ny fari-piadidiana ara-tafika na peratra avo lenta takiana manokana hafa, toy ny haingam-pandeha ary ireo dia hampiasaina amin'ny fiara anaty rano, peratra fiarovana sy milina ary milina mavesatra, hanao fikorontanana mekanika isika, bisikileta amin'ny hafanana, hafanana ambony, hafanana ambany, hovitrovitra, hamandoana, fanelingelenana famantarana, fitsapana hafainganam-pandeha hafa sns. Ireo fitsapana ireo dia hifanaraka amin'ny fenitry ny tafika amerikana na ny fepetra fitsapana voafaritry ny mpanjifa.
Inona ny slip-HD-SDI anananao? Mila maro amin'izy ireo isika.
Amin'izao fotoana izao dia manana peratra slipika 12I, 18way, 24way ary 30way SDI isika. Izy ireo dia voafintina ary mora apetraka. Izy ireo dia miantoka famindrana mari-pamantarana marimaritra iraisana amin'ny horonan-tsary famaritana avo lenta ary afaka mahafeno ny fepetra takian'ny fampiharana amin'ny fahitalavitra sy sarimihetsika.
AOOD TECHNOLOGY voafetra
Telefaona: +86 755 29527430
■ Fahaiza-manao R&D mahery
■ Kalitao azo antoka sy tsy miova
■ Fanaterana haingana
■ Serivisy azo atokisana azo atokisana
Home Robots dia lasa tsena robotic lehibe indrindra amin'ny peratra slip
Amin'ny fampiharana robotic, ny peratra slip dia fantatra amin'ny hoe robotic rotary joint na robina slip slip. Izy io dia ampiasaina handefasana ny famantarana sy ny herinaratra avy amin'ny endriny ifotony mankany amin'ny vondrona fanaraha-maso sandry robotic. Manana faritra roa izy: ny ampahany mijanona dia napetraka eo amin'ny sandrin'ny robot, ary ny ampahany mihodina kosa miakatra amin'ny tànan'ilay robot. Miaraka amin'ny rotary robotic joint, ny robot dia afaka mahatratra tsy misy farany ...
Fanoherana fanoherana ny fihorakorahana Downhole ary ny fiakaran'ny maripana avo Ri ...
Ny fitaovana Downhole dia mitaky peratra slip mba hamindrana angovo sy angon-drakitra ary hanafoanana ny fanodikodinam-tariby sy ny fametahana amin'ny tontolon'ny fitrandrahana mafy indrindra. AOOD amin'ny maha-mpamolavola sy mpanamboatra peratra slip elatra azy, mifantoka hatrany amin'ny fangatahana fitaovana farany fandavahana downhole ho an'ny peratra slip, dia nahomby tamina fahombiazana avo ...
Vokatra vaovao natomboka
Miaraka amin'ny fitomboan'ny fangatahana fantsom-pandefasana horonantsary famaritana avo lenta amin'ny fampitaovana 1080P HD, ny AOOD dia namolavola peratra vaovao HD 36-SDI ADC36-SDI. Ity maodely ity miaraka amin'ny savaivony 22mm ivelany sy ny haavony 70mm ihany, dia afaka mamindra famantarana / hery iraisana 36 sy mpiray amin'ny RF Rotary 1 fomba ampiasaina hamindrana ireo signal 1080P HD. Ny compact s ...